UMILA KUNIS UGCINA I-TIFFANY ENGAGEMENTMENT RING YAKHE KWI-SAFE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UMila Kunis Ugcina iRing yakhe yokuzibandakanya eyiTiffany entle ngendlela ekhuselekileyo
UMila Kunis Ugcina iRing yakhe yokuzibandakanya eyiTiffany entle ngendlela ekhuselekileyo
UMila Kunis (L) no-Ashton Kutcher baya kwibhasikithi phakathi kweDetroit Pistons kunye neLos Angeles Clippers kwiziko iStaples nge-Matshi 22, 2014 eLos Angeles, California. (Ifoto nguNoel Vasquez / imifanekiso yeGC)
Ngu: Esther Lee 08/08/2016 ngo-11: 09 AM
Yimpahla exabisekileyo. UMila Kunis kutyhilwe kudliwanondlebe olutsha ukuba ugcina umsesane wakhe wokuzibandakanya omnandi waseTiffany & Co kumyeni wakhe UAshton Kutcher itshixiwe kwindawo ekhuselekileyo- kwaye ngesizathu esivakalayo.
Inkqubo ye- Oomama ababi inkwenkwezi, 32, wavula ukuya Australia UKyle noJackie O bonisa ngoMvulo malunga ne-sparkling sparkling, engafane ayinxibe esidlangalaleni. Iringi yam yokuzibandakanya ikwibhokisi yediphozithi yokhuseleko, utshilo uKunis. Ndifana, 'andinakuyinxiba le nto kuba kukho umntu oza kusika isandla sam kuyo.'
lwendlovu xa kuthelekiswa nelokhwe emhlophe
Ukudubula okusondeleyo kwendandatho yokuzibandakanya kaMila Kunis evela kuAshton Kutcher. (Ifoto nguNoel Vasquez / imifanekiso yeGC)
Ngaphandle kokufihla ukubengezela kwexabiso, uKunis wayichaza iringi njengeyona intle ngokumangalisayo, kwaye wahambisa iinkcukacha ezithe kratya malunga namaqela omtshato wakhe abiza ixabiso eliphantsi. Umdlali weqonga utyhile uConan O'Brien kwinyanga ephelileyo ukuba yena noKutcher bathenga amakhonkco abo e-Etsy ngexabiso leedola ezili-190.
Isikhumbuzo seminyaka engama-30 somfazi
Ndithathe isigqibo sokuba imitshato yethu yomtshato izakuba mihle kwaye intle kwaye ilula, utshilo uMvulo. Eyam yeyiplatinam eyi-1mm kwaye eyakhe iyi-2mm yegolide etyheli kwaye yenziwa lixhegwazana elimangalisayo.
UMila Kunis ubonisa umtshato wakhe we-Etsy kwiConan. (Ifoto ngoncedo lwe-TBS)
Inkwenkwezi ekhulelweyo iphinde yaxelela u-O'Brien ukuba akanakuthethelela amaxabiso anyukayo amanye amaqela omtshato anikezelwa ziinkampani zobucwebecwebe. Ndandifana, 'Zingakanani? Le yenzululwazi yeenkwenkwezi! ’UKunis uyakhumbula. Ke, ndaya ku-Etsy kwaye ndandifana, '$ 90?' Bendifana, 'Thenga ngoku!' $ 90 wonke umntu. '
Ngapha koko, ibhendi yomyeni wakhe ibiza ngaphezulu kancinci. I-Ashton yayiyi- $ 100, ke ngobuchwephesha ibhendi yakhe yomtshato yayixabisa kancinci, wabelana. Iringi yam yokuzibandakanya intle, kodwa andikhe ndiyinxibe. Le ndandatho, ndinje, ‘Yi $ 90!’ Kumnandi, uqaphele. Lo mntu wayeku-Etsy wayengenalo nofifi lokuba benza intsimbi ethini, kodwa babemangalisa kwaye behle kakhulu kwaye benembeko kwaye benesisa.
izipho zekrisimesi katatazala
UKunis noKutcher badibana okokuqala kwiseti yaloo '70s Show. Emva kwamashumi eminyaka yobuhlobo, iinkwenkwezi ekugqibeleni zatshata ngoJulayi 2015. Babelana ngentombazana encinci egama linguWyatt kwaye ngoku balindele umntwana wabo wesibini.
Benza ntoni abaCwangcisi boMtshato abaxelela amaqabane ukuba mabenze malunga nobhubhane weCoronavirus
I-Fiance Brooks yase-Julianne Hough idumisa 'iGrisi: Phila' ngokuSebenza
Izipho ezingama-33 zoDade-in-in-Law wakho ezokuqinisa kwangoko iBond yakho
U-Selena Gomez unxibe isinxibo esiphefumlelweyo esitshatileyo kwiKhaphethi ebomvu kwiVeki yeVeki: Fumana ukuKhangela okungu-360-Degree
'Umfazi Olungileyo' UJess Weixler Utshata noHamish Brocklebank: Iifoto Zomtshato neBachelorette!
UMicrosoft Mike's Alex Pettyfer kunye neModeli Toni Garrn Ukutshata kwelinye ilizwe
Ukugcina iitshefu zomtshato kuzo zonke iiVIP zakho
Imithetho yeVanderpump 'iStassi Schroeder ibandakanyeka kuBoyfriend Beau Clark
Iringi yokuzibandakanya kaLauren Bushnell ixabisa i $ 60,000: Fumana Zonke Iinkcukacha
UScheana Shay ovela 'kwimigaqo yeVanderpump' uyabandakanyeka
I-18 yomtshato kunye ne-Bridal Shower Themes ezingagqitywanga
Okuqhotyoshelweyo ngeGaraji eViweyo (Iinkonzo kunye neengozi)
Utshatile ekubonweni kokuqala kuka-Anthony D'Amico Utsho ukuba yayiLuthando oluBonwayo ekuboneni kokuqala kunye no-Ashley Petta
UChris Pratt kunye no-Fiancée Katherine Schwarzenegger Benza iKhaphethi yabo ebomvu ebomvu
UMeghan Markle kunye noPrince Harry amaXesha amaHlanu aQhelekileyo eIreland: Jonga Zonke iifoto
Choice Umhleli Ukuba
izimvo zesipho somtshato somhlobo osenyongweni
Utshintsha njani ngokusemthethweni igama lakho e-oregon
izipho zomtshato kubantu abatshatileyo abanayo yonke into
Izimvo zepatio ze-DIY
iinwele zomtshato phezulu okanye ezantsi
Iinwele ezisongekileyo zeendwendwe zomtshato
ukuba uza kunxiba ntoni ugcine umhla
USofia Vergara, uJoe Manganiello Batshatile: Ngaphakathi kwabo Umtshato wePalm Beach
10 Izimvo zoMtshato oShushu weVidiyo
Copyright ©2022 | ba-ca-kunstforum.at